Mishumo Inogoneka muAFA | Mutemo Makambani Dubai
Mishumo Yegariro muUAE
Iwe unoda kuwona kana rwizi rutsva rwemari kana bhizinesi modhi richizokushandira? Ehe, apa ndipo panogona kuitika nhoroondo yekubudirira. Feasibility mishumo ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvaunogona kuita kuti uone kana chimwe chinhu chakakodzera bhizinesi rako. Hezvino zvese zvaunoda kuti uzive nezvazvo.
Ndeapi mishumo yekugona?
Mariumiro yemari inosanganisira yakanakisa uye yakaipa kesi mamiriro
Iyi ndiyo chirevo chinozadzwa nehuwandu hwekuverenga uye ichakuudza sarudzo dzakasiyana dzaungasarudza kubva. Kune nguva dzose kune mashoma zviwanikwa aunogona kushanda nawo uye nhoroondo yekusimbisa inokuudza nzira yakanakisa iwe yekushandisa izvo mashoma zviwanikwa epurojekiti yako.
Nekudaro, iyi isati yasvika nhoroondo yekugona. Uku ndiko kuongorora kwechirongwa iwe chaunoda kuhwiririra. Chidzidzo chacho chinotarisira mubvunzo mumwe chete: Ko chirongwa chinogoneka here? Iwe unobva wagadzirira kupindura uyu mubvunzo nenzira dzakasiyana uye kana chirongwa chekutanga chakundikana iwe uchafanirwa kuuya nehurongwa hutsva.
Muchidimbu, inotaurira kambani kuti vangafanira kuenda neprojekiti yakati here kana kuti kwete. Kana chidzidzo changoitwa, mushumo unogadziriswa uye chirevo chekupedzisira chobva chapiwa.
Kuongorora kukosha kweprojekiti kana bhizinesi riripo
Kuongorora kwekugona kwenzira inzira yekuongorora kugona uye kufanira kweprojekiti kana bhizinesi. Pele bhizinesi risati ratora nguva nemari mupurojekiti, ivo vanofanirwa kunzwisisa kuti chirongwa ichi chingave chakanakira sei kusati wasimba.
Chii chekufunga kana uchigadzira zvinokwanisika zvidzidzo / mishumo?
Kunyange isu tichiita sarudzo zuva nezuva, vanoita sarudzo vanoisa nguva yavo nemari muzvirongwa vanofanirwa kunzwisisa kuti sei vachifanira kuenda nesarudzo. Chirevo chinopa nekuongororwa kwakadzama kunobatsira mukufunga zvimwe sarudzo pane yekutanga purojekiti. Hezvino izvo zvaunofanira kufunga nezvazvo paunogadzira feasible Study / report:
Iwe unofanirwa kugadzira chidzidzo icho nenzira iyo chero icho chinovavarira kuchanzwisisa. Nguva zhinji vanhu vanoda kuti kudzidza kuve kwakavakirwa pazvinangwa zvebhizinesi neramangwana ravo. Izvi zvinovabatsira kuti vazive kana zvakakodzera kuisa nguva nemari nemari. Iwe unofanirwa kuita kuti kudzidza kuve kwakabatana nekushandisa shanduko iwe yaunoda kuona mune ramangwana.
Chokwadi uye data inoita yako mushumo bulletproof. Chirevo chako chinofanirwa kuve nekuvimbika uye data ichapa nezvakangoita. Iwe unoda ruzivo uye rwakavimbika masosi kudzosa zvaunoda.
Kunzwisisa dzimwe nzira
Nzwisisa nzira idzo nzira dzako dzaunofananidza nedzako yepakutanga hurongwa hwakavakirwa kwakatenderedza chokwadi uye manhamba. Izvo zvakakosha kuti iwe unopedzawo dzimwe nzira. Izvi zvichaita kuti sarudzo yako itaridzike zvakasiyana uye vateereri vako vanogona kuita nyore kuzvienzanisa ivo pachavo. Ivo vanofanirwa kuona kuti nei sarudzo yako iri yakanakisa.
Misiyano pakati peKutya Kufunda uye Bhizinesi Kuronga
Isu tatoziva kuti chii chinogona kuita kudzidza uye tinozvibata zvisati zvaita bhizinesi chirongwa. Urongwa hwebhizinesi hunogadzirwa kana mukana uchisarudzwa uye wakasikwa. Urongwa hwebhizinesi hunoratidza kukura nekusimudzira kwebhizinesi panguva iyi izvo zvinoita fundo yekuvandudza isati yaona kugona kwebasa.
Zvikonzero zvishanu nei uchifanira kuita feasible kudzidza
Inobatsira kujekesa nekutsanangura zvinangwa
Inobatsira mukugadzira chirongwa chebhizinesi
Inobatsira mukuita chirongwa
Batsira iwe kuti uone kuti kuita kwako kwakanaka sei
Batsira iwe kuti unzwisise vateereri vanonangwa
Iwe unogona kugadzira feasible yekudzidza kune chero basa kana chirongwa. Zvichakubatsira kuongorora iwe zano uye kuunza zvimwe sarudzo. Pasina chidzidzo chekugona uye kuudza mukana wako haungatungamire mberi kana kusangana nematambudziko emangwana.
Huyai nebhizinesi renyu Idea kuMusika weAEE
Ongororo yeMusika inosanganisira yekutarisa indasitiri uye inodikanwa yemusika